Vaovao tsy marina io milaza fa 10 ihany no nadoboka eny am-ponja fa ity 27 izay lazaiko anao ity no vaovao marina”, hoy ny zandary iray anisan’ny nanatanteraka ny famotorana, raha nitafa mivantana tamin’ny mpanao gazetinay. Efa vita ny famotorana ny fianakavian’ireo telolahy izay hita faty teny amin’ny reniranon’ny Onive Ampitatafika. Vokatry ny fanadihadian’ny zandary no nahalalana fa miaramilan’ny RFI no nisambotra azy ireo tany Ambohimahasoa, ny alakamisy 21 mey teo. Araka ny fampitam-baovaon’ny mpitandro filaminana, nanatanteraka fampandrian-tany tany an-toerana ireo miaramila ireo. Nahazo “renseignement” ireto farany fa jiolahy ikoizana eny amin’ny faritra Ambohimahasoa ireo telolahy ireo. Tsy nisy taratasy fitoriana sy tsy nahitana vavolombelona anefa fa noho io fitsikilovam-baovao na renseignement io fotsiny dia notanan’ireo miaramila izy ireo. Rehefa nosamborina anefa tsy natolony ny tompon’andraikitry ny mpitandro filaminana tany an-toerana, tahaka ny zandary na ny polisy fa nofatorany tao anaty fiara nanomboka ny 21 mey ka hatramin’ny 30 mey teo. Io alakamisy 30 mey io no tapitra ny iraka fampandrian-tany tany an-toerana notanterahin’izy ireo, ary nentiny niakatra nihazo an’Antananarivo. Voafatotra koa ny vozony ka maty izy ireo ary natsipin’ireo miaramila tao amin’ny reniranon’Ampitatafika, RN7. Nandritra ny famotorana no nahalalana fa miaramila 27 no voarohirohy. 28 izy ireo mantsy no nanatanteraka ny iraka tany Ambohimahasoa fa ny iray izay mpamily fiara tsy teo an-toerana fa mbola nanao “mission” ka ireo 27 io ireo no voapanga tamin’ity raharaha vono olona telo izay hita faty ity. Ny zoma hariva teo no niakatra fampanoavana teo amin’ny fitsarana Anosy ary ny sabotsy 8 jona tamin’ny 1 ora maraina no naiditra am-ponja vonjimaika teny Tsiafahy. Noho ny fiahiahiana ny kolikoly izay manjaka, niditra fitsaram-bahoaka hatramin’ny miaramila.